Awoodaha Adduunka oo tartan ugu jira in “Saldhigyo Military iyo Xaruumo Ganacsi” ay ka sameystaan dalka Jabuuti - Wargane News
Home Somali News Awoodaha Adduunka oo tartan ugu jira in “Saldhigyo Military iyo Xaruumo Ganacsi”...
Awoodaha Adduunka oo tartan ugu jira in “Saldhigyo Military iyo Xaruumo Ganacsi” ay ka sameystaan dalka Jabuuti
Dalka Jabuuti waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul, uguna qalalan ee dhulka. Waa dhul qeyb ka mid ah ay tahay lama degaan ah. Dalka Jabuuti malahan kheyraad dabiici ah, heerka shaqa la’aanta ayaa sidoo kale ah 50%, nolosha ayaa sidoo kale aad u adag.
Laakiin dalka Jabuuti, waxaa uu heysaa mid kamid ah hantida aadka u qiimaha badan.
Dekaddaasi quruxda badan ee dhaqaallaha dalkasi qeybta ka qaadata ayaa waxaa dhistay dowladda Fransiiska tobanaan sano ka hor.
Magaallooyinka dalka Jabuuti, ayaa dhinaca kale ah kuwo aad u dhisan waxaana bar-bar socda nabad iyo naruuro.
Soomaaliya iyo Djibouti waa laba dal oo walaalo ah, kana dhaxeeya xiriir sal adag.
Soomaaliya ayaa kaalin ballaaran ku laheyd gobonnimada wadanka Djibouti, iyadoo aqoonsatay qarannimada iyo madax banaanida dalkaasi isla markii lagu dhawaaqay gobonnimada dalkaasi oo ku beegneyd June 27, 1977, waxaana labada dal ay u saldhigeen xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi wadaag ah oo ku dhisan walaalnimo.
Wargane Tv: UCID iyo KULMIYE oo ka hadlay Go’aankii Maxkamadda Sare
Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo Nairobi kaga qayb-gelaya Shirka Caalamiga ah ee Dadweynaha iyo Horumarka
Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo u Ambabaxay dalka Turkiga
Somaliland: Milicsiga Xidhiidh Uu Madaxweyne Cigaal La Bilaabay Ereteriya; Ujeedadii Uu Ka Gaadhay Iyo Su’aasha Mar Kale Maanta Taagan